qBittorrent: Fampiharana tena tsara sy tsotra hitantanana renirano | Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | | fampiharana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
QBittorrent torrent mpitantana rakitra
Amin'izao fotoana izao dia misy serivisy web marobe mamela antsika hizara rakitra maimaimpoana nefa tsy mila mampakatra azy ireo amin'ny rahona ny fomba mahazatra sy tsotra hizarana rakitra be dia be amin'ny namantsika dia ny fanaovana azy amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny tambajotran-drakitra falehan-driaka.
Ary na dia fantatry ny ankamaroan'ny olona aza ny fomba hahitana ireo rakitra torrent amin'ny Internet hampidinana ny atiny amin'ny karazany rehetra, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mbola tsy nanandrana namorona ny riandrony manokana na nanova ny solosain'izy ireo ho Torrent Server. Noho izany, Androany isika dia hiresaka momba ny qBittorrent, izay androany dia iray amin'ireo mpanjifa malaza indrindra amin'ny fitantanana torrent amin'ny GNU / Linux.
Amin'izao fotoana izao dia afaka mamorona rakitra torrent isika ary mizara ny rakitra (horonan-tsary, antontan-taratasy na sary) amin'ireo namantsika na koa amin'ny vondron'olona mpampiasa Internet, mampiasa qBittorrent. Fa inona ny qBittorrent?
1 Inona ny atao hoe qBittorrent?
2 Ara-dalàna ve ny fampiasana qBittorrent?
3 Ahoana ny fampiasana qBittorrent?
4 Endri-javatra ankehitriny
5 Ahoana no fomba hamoronana rakitra torrent sy hizarana azy?
5.1 Dingana 1: Alefaso ny safidy "Mamorona torrent" (Ctrl + N)
5.2 Dingana 2: Fenoy ny endrika Famoronana Torrents
Inona ny atao hoe qBittorrent?
qBittorrent dia rindrambaiko maimaimpoana sy maimaim-poana ho an'ny GNU / Linux Operating Systems izay manampy antsika hifanakalo rakitra amin'ny olona hafa manerantany amin'ny alàlan'ny protokol P2P Bittorrent. Ity rindrambaiko ity dia safidy tsara indrindra amin'ny rindrambaiko mitovy amin'ny Windows, Mac OS ary Linux, satria multiplatform io.
Anisan'ireo asany manaitra azy indrindra ny motera fikarohana ao aminy, izay hahafahantsika mahita ireo rakitra zarain'ny hafa amin'ny tamba-jotra haingana sy haingana. Ho fanampin'izay, ny qBittorrent dia ahitana ny fanatsarana sy fanitarana Bittorrent farany, izay mamela azy hanao tsara sy tena tsara, raha oharina amin'ny hafa.
Ary ny tsara indrindra amin'ny rehetra dia ny qBittorrent dia ny lozisialy maimaimpoana ary navoaka tamin'ny alàlan'ny lisansa GNU GPLv2, sNy kaody u dia misokatra ary misy ho an'ny rehetra ary azo ampiasaina indray amin'ny alàlan'ny fehezanteny voalaza. Mahatonga izany qBittorrent, fitaovana azo eritreretina tsy misy malware, spyware, doka na programa antoko fahatelo tsy ilaina, toy ny fampiharana mitovy amin'ny Private Operating Systems.
anefa tsy maintsy feranay izany Na dia navotsotra tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GNU GPLv2 aza izy io, miaraka amin'ny fanampin'ity ankanavaka manokana manaraka ity:
Ankoatr'izay, ankanavaka manokana, ireo manana zon'ny mpamorona dia manome alalana hampifandray ity programa ity amin'ny famakiam-boky "OpenSSL" an'ny tetikasa OpenSSL (na miaraka amin'ireo kinova novaina izay mampiasa ny fahazoan-dàlana mitovy amin'ny tranomboky "OpenSSL") ary mizara ireo azo ampiharina mifandraika . Tsy maintsy mankatoa ny Lisansa GNU General Public ianao amin'ny lafiny rehetra amin'ny kaody ampiasaina rehetra ankoatry ny "OpenSSL". Raha manova rakitra ianao dia azonao atao ny manitatra an'io fanovana io amin'ny kinovan'ny rakitra (fa), saingy tsy voatery hanao izany ianao. Raha tsy tianao dia esory ao amin'ny kinovanao ity fanambarana faningana ity.
Ara-dalàna ve ny fampiasana qBittorrent?
Na dia qBittorrent dia rindrambaiko fizarana rakitra mitovy amin'ny peer-to-peer (P2P), ary ara-dalàna tanteraka ny fampiasana azy io, saingy mety tsy ara-dalàna ny misintona atiny voafetra miaraka amin'ity rindrambaiko ity, miankina amin'ny lalàn'ny firenena tsirairay.
Ahoana ny fampiasana qBittorrent?
qBittorrent dia tena mora ampiasaina, raha efa nampiasa programa hafa mitovy amin'izany ianao, fa raha tombony dia manana interface tsotra izy ary amin'ny Espaniôla no ivoahany. Manana a tranokala ofisialy tena azo ampiharina ary feno fizarana ilaina hampianatra haingana antsika hampiasa azy io.
Raha te hamaky bebe kokoa momba ireo fiasa amin'ny qBittorrent sy programa mitovy amin'izany ianao dia tsidiho ity lahatsoratra bilaogy teo aloha momba ilay raharaha Ary raha mila fampahalalana bebe kokoa momba izany ianao dia tsidiho ny azy ireo tranokala ofisialy ao amin'ny Github.
Fampifandraisana an'ny mpampiasa mitovy amin'ny μTorrent
Masinina fikarohana mifangaro sy azo zahana
Fikarohana miaraka amin'ny tranokala fikarohana torrent maro
Ny fangatahana fikarohana manokana momba ny sokajy toy ny: boky, mozika, rindrambaiko
Fanohanana RSS RSS amin'ny sivana mandroso fampidinana
Fanaraha-maso lavitra amin'ny alàlan'ny interface web an'ny mpampiasa, voasoratra miaraka amin'ny AJAX, ary saika mitovy amin'ny interface mahazatra.
Fampidinana an-tsoratra (misintona milahatra)
Fanaraha-maso mandroso amin'ny ony, ny trackers ary ny mitovy taona aminao
Sivana IP (manohana ny endrika eMule sy PeerGuardian)
Fanohanana mandroso ny seranan-tsambo UPnP / NAT-PMP
Hita amin'ny sehatra rehetra: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, OS / 2
Hita amin'ny fiteny 70 mahery
Fanohanana ireo fanitarana Bittorrent mifanentana maro, toy ny:
Tabilao fizarana fizarana (DHT),
Protocol Exchange Peer (PEX),
Discovery eo an-toerana (LSD)
Ahoana no fomba hamoronana rakitra torrent sy hizarana azy?
Dingana 1: Alefaso ny safidy "Mamorona torrent" (Ctrl + N)
Dingana 2: Fenoy ny endrika Famoronana Torrents
Ao amin'ny varavarankely voalohany hita etsy ambany:
Fenoy ireto safidy manaraka ireto:
Làlana: Misafidiana rakitra na fampirimana hanondroana ilay riandrano.
Fikirana: Ny lisitra "Private" dia tsy voatery ho an'ny mpampiasa mandroso ary ny "Famafazana eo noho eo" no tolo-kevitra
Saha: Manampia "URL Tracker" azo antoka sy miasa araka izay azo atao ary fenoy ireo saha hafa (tsy voatery). Tsidiho ity rohy manaraka ity hahazoana "URL an'ny Tracker" nohavaozina.
Araka ny hita amin'ireto sary manaraka ireto:
Izao dia mila mandefa ny fisie noforoninao fotsiny ianao ary manamarina ny fifandraisana sy ny fisintomana ilay rakitra amin'ilay olona hafa. Aza adino fa imbetsaka dia mila fotoana fohy vao miparitaka amin'ny alàlan'ny mpizara trackers ny riandrano mba hahafahany misintona azy. Ary tadidio fa ny fahombiazan'ny asan'ny torrent dia ao amin'ny "URL Tracker" izay ampiasaina hamoronana azy.
qBittorrent dia mpanjifa falehan-driaka tena azo ampiharina sy mandroso, noho izany dia manana fiasa ilaina ampy izy hitantanana mora ny fampidinana. Ny interface sy ny asany dia mifantoka amin'ny fampidinana ilay riaka izay angatahintsika nefa tsy misy fahasarotana be loatra. Farany, rindrambaiko maimaim-poana izy io ary noho izany dia tsy misy dokam-barotra na pop-ups fampiroboroboana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » qBittorrent: Fampiharana tena tsara sy tsotra hitantanana renirano
Fampianarana tena tsara!.
Tsara raha ampiana hevitra toa ny Trackers, Peers amin'ny fomba mazava sy takatra.
Ho fanampin'izay, azafady, lesona momba ny fomba hamoronana serivisy falehan-driaka azo antoka ary manokana araka izay azo atao.
Nandefa mailaka zavatra fanampiny momba anao aho tamin'ny alàlan'ny mailaka. Vintana sy fahombiazana!
Maria Teliz dia hoy izy:
Mamaly an'i Maria teliz
yeididi12 dia hoy izy:
Salama, namana Internet, mahita ny hevitrao. Te-hanambara ny fisalasalako aho satria andro vitsy lasa izay dia te-hisintona fampiharana tsara aho hahafahako manana kalitao tsara kokoa amin'ny horonan-tsary, lalao ary zavatra hafa, dia nilaza tamiko momba ny BitTorrent izy ireo, fa ny safidy tsara indrindra dia ny uTorrent ary nalefan'izy ireo nantsoina ity pejy ity misintona utorrent ofisialy , any no ahafahako mahazo izay rehetra tadiaviko, fa raha ny marina dia tsy fantatro hoe manao ahoana ity pejy ity ary raha azo itokisana tanteraka izany dia tiako ny hanomezanao ahy ny hevitrao momba ilay lohahevitra naseho.
Mamaly an'i yeididi12